Ndụmọdụ Mgbasa ozi Email Drip, Ihe Nlereanya, Statistics na Omume Kasị Mma | Martech Zone
Ndụmọdụ Mgbasa Ozi Email, Ihe Nlereanya, Statistics na Omume Kasị Mma
Dịka onye na-ere ahịa, anyị na-ebugharị ndị na-edebanye aha anyị na ozi ịntanetị na-eme ka ha mara banyere ire ere ma ọ bụ mee ka ha dị ọhụrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị. Ọ bụrụ na anyị eruola, anyị nwere ike ịkewaa ma hazie ozi ịntanetị ndị ahụ. Agbanyeghị, a ka na-ezipụ ozi ịntanetị dabere na usoro ihe omume anyị, ọ bụghị ndị debanyere aha. Ntapu email mkpọsa iche n'ihi na ha na-zitere ma ọ bụ paced dabere na ụtụ magazin, bụghị anyị. Ntapu email ọrụ - na-amụba 3x na pịa-site ọnụego nke a ahụkarị ahịa email
Gịnị bụ atasị Email Mgbasa Ozi?
Email drip mkpọsa bụ usoro nke ozi ederede akpala edezi edepụtara tupu emee ya mgbe agbakwunyere onye debanyere aha ya na nurturing mkpọsa ma ọ bụ onye debanyere aha ugbu a gbanwee omume ha wee bido ịzụlite, ịzụ ahịa, ma ọ bụ mkpọsa email mgbasa ozi. Ozi ịntanetị ahụ nwere ike ịbịa n'oge a kara aka ma ọ bụ na mgbanwe nke omume onye debanyere aha, ma ọ bụ abụọ.
Thatlọ ọrụ ndị kachasị nke ọma na azụmaahịa ahịa na-emepụta 80% karịa ahịa na 33% ụgwọ dị ala. Na nke a infographic si Email Ndị mọnk, ha na-egosi uru niile nke email drip mkpọsa na-enye:
Ike akpaghị aka nkwurịta okwu ọwa iru ma na-akpọtụrụ atụmanya.
Ike itinye atụmanya ma gbanwee ha n'ahịa na ire ahia ruru eru.
Nwee mmekọrịta na-enweghị itinye aka na mmadụ.
Mee ịtụkwasị obi na ntụkwasị obi oge na-adịghị anya tupu ịbanye na ahịa ahịa.
Propel TOFU, MOFU, na BOFU na ọkwa niile ma chọpụta atụmanya bara uru dị elu, ohere nke ntụgharị site na atụmanya ndị a ma nweta ọtụtụ data data ndị ọzọ.
mfe ịme mkpebi n'oge mmefu ego siri ike.
Ihe omuma ihe omuma na-enye ihe omuma banyere atumatu na omume kachasi nma n’ime ntuputa nke ndu site na uzo obula nke ntughari ntughari, ihe nlere nke ntaneti nke imeputa nke oma na-adi ka, ihe ndi ozo iji nwalee n’ime ntaneti email gi, mmeghe nke uzo email, na nurturing na imepụta ihe kacha mma email.
Tags: email ọpụpụntapu email mkpọsaigbapu email mgbasa ozi workflowntapu email ahịaofu mmiri emailemailflowflow
N’ezie, N’ezie, Achọrọ M Jiri Ihu Igwe Gị… Ma…
Ụdị ndenye aha gị anaghị arụ ọrụ.
Daalụ nke ukwuu maka ime ka anyị mara!